Wowow ezimbini Handle Khitshi faucet kunye Side Isitshizi Stainless
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Khupha iipompo zeKhitshi / WOWOW Isiphatho Esibini Sombhobho Wekhitshi Ngecala lokutshiza ngeSinyithi
le faucet ibandakanya isitshizi secala. Ukwenza imisebenzi yokucoca yemihla ngemihla kube lula, ungabeka kunye nesiqinisekiso, usazi ukuba iimpompo zasekhitshini zibuyelwe liwaranti yethu yobomi.
Icala lokutshiza lekhitshi elisecaleni 23118A4
Amacala esitshizi ekhitshini asecaleni eza iimilo ezininzi, iifom nobungakanani. Le faucet ekhitshini esecaleni yesitshizi seWOWOW iza nesicoci secala esisebenzayo ongasisebenzisela ukwenza izimbiza zakho ezingcolileyo, iipani kunye nezitya. Isitshizi secala ngokuqinisekileyo sinokwenza ukugqiba imisebenzi yakho yemihla ngemihla ibe ngumsebenzi olula nolonwabo. Isiporho secala le-WOWOW sibekwe ecaleni kwetafile yesitshizi secala ngokwayo, kwaye ilungele ukukhutshwa kwangoko kwaye ngokulula. Ngombhobho wayo omde wamanzi i-intshi ezingama-60, iya kwandisa indawo yakho yokuhlamba kakhulu. Ngokukodwa xa ikhitshi lakho lixhotywe ngesinki ephindwe kabini, eli phepha lokucoca ulusu linokuza kuluncedo kakhulu. Yonke indawo, into okanye ikona ngaphakathi kunye neendawo ezijikeleze ikhitshi lakho inokufikelelwa ngecala lesitshizi secala lesitshizi se WOWOW.
Isitshizi sasecaleni sikuvumela ukuba ucofe ngokuthe ngqo amanzi ngokuchofoza ngokulula kwicala elingasecaleni kwesitshizi. Ngaphandle kokucoca kwangaphambili unokusebenzisa isitshizi secala ngokuhlamba izandla, okanye eminye imisebenzi yasekhitshini. Umbhobho wamanzi wesitshizi sasecaleni uqhagamshelwe kunye nesikhitshane kunye nokuhambisa kwayo amanzi ngevali ekhethekileyo. Esi sixhobo soqhagamshelo silawula apho amanzi abhekiswa khona xa kusetyenziswa isitshizi secala. Ngale ndlela unokuba namava omjelo wamanzi onzima ukuze ucoce iipleyiti zakho ngaphandle kokulahla nawaphi na amandla alo.
Yila isitya sokucoca ekhitshini
Eli cwecwe lokucofa ikhitshi le-WOWOW lenziwa ngononophelo olukhulu kunye nomzamo. Abaqulunqi be-WOWOW babefuna ukudibanisa amanqaku ahlukeneyo ukuze beze kwisitayile esimnandi, sanamhla, nangaphezulu kwayo yonke uyilo olukhazimlayo lwesikhitshini sekhitshi. Uyilo oluphezulu lwe-arc lwalunyulwa, njengoko ebizwa ngokuba yi-gooseneck ngokukhawuleza kunika isitayile esihle kwifenitshala ekhitshini. Kwelinye icala, ezi zibambo zimbini zenzelwe ukuba zikwazi ukubamba into ekhethekileyo kweli cwecwe lesitshizi seWOWOW. Okokuqala, kukhethwe izibambo ezibini ukunika impembelelo eyoyikisayo ngeli cwecwe lokucoca ikhitshi. Okwesibini, izibambo zifumene uyilo olukhethekileyo lokuyenza ukuba le cwecwe lokucoca ikhitshi ngokungathandabuzekiyo libambe iliso kuyo nayiphi na ikhitshi.
Ukugqitywa okukodwa kwe-chrome yecala lokutshiza elisecaleni lekhitshi le-WOWOW kuboniswa kakhulu. Ngale ndlela imbonakalo efana nesipili ifikelelwa, enokudityaniswa nayo nayiphi na indlela yokuhombisa. Itafile yesitshizi esecaleni yesitshizi yentsimbi, ifaka imbonakalo yayo yecandelo lezemveliso, kunye nelungelo elifanelekileyo lokuhlala ixesha elide. Ukugqitywa kwe-stain ngokuqinisekileyo kuya kukuxhasa ukubonakala kwekinki yakho. Uyilo lwakho (olutsha) lwekhitshi ngokuqinisekileyo luya kuphakanyiswa ngeplagi ekhitshini esecaleni kommangaliso.
Udidi lokuqala lwesitshizi secephe ekhitshini
I-Wowow yaziwa kwihlabathi liphela ukuba inikeze ngeefefit zasekhitshini lodidi lokuqala ngentengo efikelelekayo. Ngokuqinisekileyo unokuchaza ukuba i-WOWOW inikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali. Uninzi lwe-A-brand lubiza kathathu okanye luphindaphinde ixabiso lentengo yoko kuhlawulwayo ngeWWOW ikhitshi layo lekhitshi, kwaye umgangatho ngokuqinisekileyo awungaphantsi kunezinye zeempawu ze-A. Sinokuthi ngokunyaniseka umgangatho wethu ulunge ngakumbi kunee-A brand. Siyakungqina oku ngokuphindaphindiweyo.
Ngenxa yokuba sithembele kwixabiso lethu lemali, sikunika ixesha leminyaka emihlanu. Ukuba isitofu sakho secala lekhitshi liyonakaliseka ngaxeshanye, uWOWOW angakuvuyela ukukubeka endaweni entsha. Ngaphandle kwengxaki. Njengabaniki abathengisi abaninzi, nkqu ezinye zeempawu ze-A, zikunika ixesha lesiqinisekiso se-5, eWOWOW sicinga ukuba kuya kufuneka ukuba sidlulele ngaphaya komgangatho weshishini. Ukuba isitofu sakho secala lekhitshi liyonakala emva kweminyaka emi-1 okanye emi-2, asicingi ukuba kuya kuba kokufanelekileyo ukuba kuya kufuneka uthwale umngcipheko woku. Isikhenkcisi esisegumbini lokutshiza esecaleni kufuneka ngaphandle kwamathandabuzo kube ubuncinci iminyaka emi-3, kwaye WOWOW sithatha uxanduva lwethu koku.
Itafile yesitshizi esecaleni kwentsimbi
Amacwecwe asekhitshini esecaleni enziwa ngezinto zodidi oluphezulu. Uyakuqaphela oku kwangoko xa ubambe le faucet yasekhitshini esecaleni ezandleni zakho. Ubunzima buyamangalisa malunga ne-50 oz, kwaye butyhila umgangatho wezinto ezisetyenzisiweyo. Njengokuba uninzi lweepompo zexabiso eliphantsi lwekhitshi zinobunzima nje kancinci, kuba ukusetyenziswa okuncinci kwezinto, okanye kwanokusilela kwezinto zesinyithi, WOWOW iyazingca ngezinto ezikumgangatho ophezulu ezisetyenzisiweyo. Izihlanganisi ze-Brass, i-stainless steel component kunye ne-high-performance valves and handles. Uyaqaphela umgangatho xa uyibona, kwaye ngepompo esecaleni yesitshizi yekhitshi yeWOWOW ayizukuhluka.
Ngaphandle kobunzima bayo, ukusetyenziswa kwemisebenzi eyahlukeneyo yompompo wasekhitshini wokutshiza kukwaveza nomgangatho wesi siqwenga sezixhobo zasekhitshini. Ibaleka njani izibambo ngaphandle kokungqubana okanye ukubuyela umva umzekelo. Ukutyibilika ukusebenzisa umbhobho wamanzi wesitshizi secala kwelinye icala, kunye nendlela ebuyela ngayo kwindawo yayo yakuqala. Kananjalo kulula kangakanani ekusebenzeni kwesi sitshizi sangaphambi kokucoca ngamanzi kunye neqhosha lesinyithi. Konke kuyongeza kumgangatho omsulwa ongenachaphaza.
Ufakelo olulula lokufafaza ngecala lokucoca ikhitshi
Icala lokutofa ngamanzi ekhitshini kulula kakhulu ukulifaka. Njengoko iza nekhithi yokufaka epheleleyo, unokufaka le faucet yasekhitshini esecaleni kwisithuba seyure. Kwaye awunakufuna iplumber ebiza kakhulu. Imiyalelo ecacileyo yenza ukuba kube lula ukufakela le faucet yekhompiyutha esecaleni, ngaphandle kokusebenzisa naziphi na izixhobo ezinzima. Zonke izixhobo zokufaka esi siqwenga sobugcisa ekhitshini lakho siza kubandakanya.
Njengoko i-WOWOW inenani elikhulayo labathengi bamanye amazwe, abaqhubeka nokubuyela kwi-WOWOW xa bafuna enye itephu, sikunika isiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90. Ngaphandle kweminyaka emi-5 yewaranti engenabungozi, uyakuyifumana kwakhona imali yakho xa ungothuswa lixabiso lemali oyifumanayo kweli cala lombhobho wokutshiza. Ufumana imali epheleleyo ngaphandle kokubuza imibuzo. Amava ethu asixelela ukuba ayizukufuneka, kodwa siya kuba nawe njengomnye umthengi wobomi kwi-WOWOW!
Izibonelelo zecala lokutshiza elisecaleni lekhitshi ngepani:
• Isitshizi esinamandla sangaphambi kokurhawula ecaleni
• Uyilo oluhle kunye elinesibindi
• Ukusebenza ngokuzolileyo
• Ukugqitywa kwe-nickel eqinileyo
I-SKU: 23118A4 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Khupha iipompo zeKhitshi tags: Uqhekeze uNickel, Ukwahlula Ukuphatha, Isicaphucaphu esecaleni
I-1.38 kg = 3.0424 lb = 48.6781 oz